ကြှနျမဇာတာကို ရေးခဲ့တုနျးက ကံကောငျးခွငျးတှထေညျ့ပေးဖို့မခေဲ့တယျနဲ့ တူပါတယျ – Shinyoon
ကံတရားကွီးက . . . ကြှနျမဇာတာကို ရေးခဲ့တုနျးက ကံကောငျးခွငျးတှထေညျ့ပေးဖို့မခေဲ့တယျနဲ့ တူပါတယျ ။ စပွီး မှေးဖှားလာကတညျးက ကံကောငျးခွငျးတှေ မဲ့ခဲ့တာပေါ့ ။
ကိုယျလိုခငျြတာတှရှေိလာတဲ့အခါ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ကွိုးစားယူရတယျ ။ နောကျကနေ ပံ့ပိုးပေးမယျ့လူတှထေကျ အနောကျကနေ အပုတျခမြယျ့လူတှခေညျြး ရပျနတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ အကွိမျကွိမျလဲပွိုခငျြခဲ့ဖူးတယျ ။
ဆှမြေိုးသားခငျြးဆိုလို့လဲ ငှရှေိတဲ့ကိုသာ ခငျတတျကွတဲ့ သူတှခေညျြးရှိနတေတျတာလေ ။ မပေးနိုငျမကမျးနိုငျခဲ့တဲ့ ကြှနျမကတော့ အဲ့ဒီအသိုငျးအဝိုငျးကွား လူရာမ၀ငျခဲ့ပါဘူး ။
အကောငျးမမွငျတတျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှငျသနျခဲ့ရလို့ထငျပါတယျ ကြှနျမက နဲနဲလေးခကျထနျခငျြတယျ ။ လူတဈဖကျသားအပျေါ လှယျလှယျလေးနဲ့ မယုံကွညျတတျခဲ့ဘူး ။ ကိုယျလိုခငျြတာတှရှေိလာတဲ့အခါ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ကွိုးစားယူခဲ့ရတာကို မြားပါတယျ ကိုယျကွိုးစားရငျး ရမလာတော့တဲ့အခါ . . .လိုခငျြနလေကျြနဲ့ပဲ မလိုခငျြယောငျတှေ ဆောငျပဈလိုကျရတယျ ။
ဒီ ဘ၀မှာ ကြှနျမပြျောပါတယျလို့တော့ မဟုတျပါဘူး ဒီဘ၀မှာ ကြှနျမ ပြျောအောငျနပေါတယျ ကိုယျလိုခငျြလို့ရလာတဲ့အရာတှေ မဟုတျပမေယျ့ မလိုခငျြပဲရလာတဲ့အရာတှကေို ကြှနျမ အတတျနိုငျဆုံးရငျဆိုငျပါတယျ ။ တဈစုံတဈယောကျကို မှီဖို့အတှေး ဘယျတုနျးကမှ မတှေးခဲ့ဖူးသလို ကိုယျ့ ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျဖို့ကလှဲလို့ဘယျသူမြားရှိမလဲလို့ ငဲ့မကွညျ့ဖွဈတော့ဘူး ။
အဆငျပွတေယျ မပွဘေူးဆိုတာ ကြှနျမအတှကျ အရေးမကွီးတော့ပါဘူး ။ အဆငျပွသေညျဖွဈစေ မပြျောသညျဖွဈစေ ကြှနျမ ပြျောအောငျနတေတျနပေါပွီ ။
ဒုက်ခတှေ ထပျပွီးရလာမှာလဲ ကြှနျမ မကွောကျတော့ဘူး ။ ဒီထပျပိုပွီးနာကငျြရလို့လဲ မထူးတော့ဘူး ။ လောကဓံကို ခါးစညျးခံရမယျ့ကံ ပါလာတယျလို့ပဲ မှတျပါတယျ ။ အတတျနိုငျဆုံးပြျောအောငျနမေယျ အတတျနိုငျဆုံးပွုံးမယျ လောကကွီးက ကံကောငျးခွငျးတှထေညျ့ပေးဖို့ မခေဲ့ရငျတောငျ ကြှနျမကိုယျကြှနျမ ဖနျတီးယူနိုငျရမယျဆိုတဲ့ ရညျမှနျးခကျြနဲ့ ရှငျသနျပါတယျ ။
ကံတရားကြီးက . . . ကျွန်မဇာတာကို ရေးခဲ့တုန်းက ကံကောင်းခြင်းတွေထည့်ပေးဖို့မေ့ခဲ့တယ်နဲ့ တူပါတယ် ။ စပြီး မွေးဖွားလာကတည်းက ကံကောင်းခြင်းတွေ မဲ့ခဲ့တာပေါ့ ။
ကိုယ်လိုချင်တာတွေရှိလာတဲ့အခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြိုးစားယူရတယ် ။ နောက်ကနေ ပံ့ပိုးပေးမယ့်လူတွေထက် အနောက်ကနေ အပုတ်ချမယ့်လူတွေချည်း ရပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အကြိမ်ကြိမ်လဲပြိုချင်ခဲ့ဖူးတယ် ။
ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုလို့လဲ ငွေရှိတဲ့ကိုသာ ခင်တတ်ကြတဲ့ သူတွေချည်းရှိနေတတ်တာလေ ။ မပေးနိုင်မကမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မကတော့ အဲ့ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကြား လူရာမ၀င်ခဲ့ပါဘူး ။
အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်ခဲ့ရလို့ထင်ပါတယ် ကျွန်မက နဲနဲလေးခက်ထန်ချင်တယ် ။ လူတစ်ဖက်သားအပေါ် လွယ်လွယ်လေးနဲ့ မယုံကြည်တတ်ခဲ့ဘူး ။ ကိုယ်လိုချင်တာတွေရှိလာတဲ့အခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြိုးစားယူခဲ့ရတာကို များပါတယ် ကိုယ်ကြိုးစားရင်း ရမလာတော့တဲ့အခါ . . .လိုချင်နေလျက်နဲ့ပဲ မလိုချင်ယောင်တွေ ဆောင်ပစ်လိုက်ရတယ် ။
ဒီ ဘ၀မှာ ကျွန်မပျော်ပါတယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒီဘ၀မှာ ကျွန်မ ပျော်အောင်နေပါတယ် ကိုယ်လိုချင်လို့ရလာတဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပေမယ့် မလိုချင်ပဲရလာတဲ့အရာတွေကို ကျွန်မ အတတ်နိုင်ဆုံးရင်ဆိုင်ပါတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မှီဖို့အတွေး ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးခဲ့ဖူးသလို ကိုယ့် ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ဖို့ကလွဲလို့ဘယ်သူများရှိမလဲလို့ ငဲ့မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး ။
အဆင်ပြေတယ် မပြေဘူးဆိုတာ ကျွန်မအတွက် အရေးမကြီးတော့ပါဘူး ။ အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေ မပျော်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်မ ပျော်အောင်နေတတ်နေပါပြီ ။
ဒုက္ခတွေ ထပ်ပြီးရလာမှာလဲ ကျွန်မ မကြောက်တော့ဘူး ။ ဒီထပ်ပိုပြီးနာကျင်ရလို့လဲ မထူးတော့ဘူး ။ လောကဓံကို ခါးစည်းခံရမယ့်ကံ ပါလာတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ် ။ အတတ်နိုင်ဆုံးပျော်အောင်နေမယ် အတတ်နိုင်ဆုံးပြုံးမယ် လောကကြီးက ကံကောင်းခြင်းတွေထည့်ပေးဖို့ မေ့ခဲ့ရင်တောင် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ဖန်တီးယူနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ရှင်သန်ပါတယ် ။